Manapaka samirery ny datim-pifidianana any Zimbaboe ny Filoha Mugabe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2013 13:01 GMT
Tsy niraharaha ireo fanoheran'ny mpiara-mitantana sy olom-pirenena Zimbaboeana ny Filoha Robert Mugabe, ary nanao fanambarana avy aminy irery fa ny 31 Jolay 2013 no hanatanterahana ireo fifidianana. Ny Praiminisitra Morgan Tvangirai, izay mpiara-mitantana ao anaty governemanta miaraka amin'i Filoha Robert Mugabe nanomboka tamin'ny 2009, dia nilaza fa tsy hanaiky io daty io.
Nisisika ireo antoko politika mba hanemorana io daty io nanomboka tamin'ny iray volana lasa izay, rehefa nandidy an'ny Filoha Robert Mugabe ny Fitsarana avo Momba ny Lalàm-panorenana mba hitazona ny datin'ireo fifidianana ny 31 Jolay araka ny fangatahana nataon'i Jealousy Mawarire, Talen'ny Ivotoeran'ny Fifidianana sy ny Demokrasia any Afrika Atsimo (CEDSA). Antoko politika lehibe dimy no nanohitra avy hatrany ny daty hentitra napetraky ny fitsarana, ary nilaza fa ilàna fotoana maro ny fanomanana ireo fifidianana goavana tahaka izao, mba hahazoana antoka fa malalaka sy marina izany.
Ny Filoha Robert Mugabe no Kandidà ho filoham-pirenena faha-roa tranainy indrindra any Afrika. Sary avy tao amin'ny sehatra ho an'ny vahoaka, avy amin'ny governemanta federaly amerikana.
Na izany aza, nametraka taratasy fangatahana teny amin'ny Fitsarana Avo i Nixon Nyikadzino, mahery fo mikasika ny zon'olombelona iray, mba hanerena ny Filoha Robert Mugabe hanondro datim-pifidianana rehefa nanaraka ireo fitakian'ny lalàm-panorenana. Milaza izy fa tsy mety, na araka ny lalàna na araka ny fitsarana, ny manao fifidianana alohan'ny 31 Jolay 2013, satria mandikà ireo zony izany.
Vantany vao nivoaka ny fanambaràna dia naneho hevitra tao amin'ny Twitter ireo vahoaka Zimbaboeana.
Nanamarika i Conor Walsh (@ConorMWalsh) fa i Mugabe no “nandidy ny fitsarana mba hamoaka didy”:
@ConorMWalsh: @Mavhure @DrMupakati hanamafy ny didin'ny Fitsaràna avo i Gushungo [Gushungo no sampin'ny Filoha Mugabe] satria fantatr'ireo mpandinika mahay fa io no didy nandidian’ Gushungo ny Fitsaràna avo mba havoaka ho didy.
Namoaka i Busie Bhebhe (@BusieBhebhe) fa:
@BusieBhebhe: @hoperuswa@zenzele Manantena aho fa hamorona milina fandatsaham-bato izay tsy azo amboamboarina izy, noho izy hiala amin'ny politika
Nanontany i Nqaba Matshazi (@nqabamatshazi) hoe:
@nqabamatshazi: moa ve ny filazana nataon'i Mugabe mikasika ny fifidianana dia fitadiavana olana, sa filokàna efa voakajy?
Consta Chimakure (@cchimakure), mpandrindra lahatsoratra ao amin'ny NewsDay dia nanamarika fa tsy nandalo tamin'ny parlemanta i Mugabe:
@cchimakure: Nampiasa ireo fahefana amin'ny maha-filoham-panjakana azy i Mugabe mba hampanekena lalàm-pifidianana ary hilazana ny datim-pifidianana, tsy nandalovana tamin'ny parlemanta
Nanazava ny fototra ara-dalàna mikasika ilay fanambarana i Crisis Coalition (@crisiscoalition)
@crisiscoalition: Nampiasain'i Mugabe ireo Fahefana maha-Filoham-panjakana azy mba hisafidianana daty, Fepetra lah.13 momba ny Fahefan'ny Filoha (Lalàna vonjimaika – Fampiharana ny Lalàm-pifidianana)
Nanontany i mandlenkosi mpofu (@mdutshwa) hoe:
@mdutshwa: @nqabamatshazi@NcubeNjabulo fitaka ve izao sa tena marina? tsy haiko loatra na fahasahiana izao fa fahatokisan-tena
Nitatitra i Stanley Kwenda (@stanleykwenda) :
@stanleykwenda: nandeha tany amin'ny Fitsarana ny PM (Praiminisitra Morgan) Tsvangirai mba handrodanana ny fanambaran'i Mugabe & mitady ny fahohanana'ny vahoaka
Farany, Marko Phiri, mpibilaogy ao amin'ny bilaogin'i Kubatana, dia nanontany hoe, “Demokrasia hoe, demokrasia inona?:
Ny azo antoka momba io fanambaràna farany io dia, misy toe-tsaina tsy fivakisan-doha momba ny fizotry ny fifidianana ao, noho ny sasany milaza fa afaka mandidy samirery ny fifidianana i Mugabe na dia teo aza ny fanambaràn'i Tsvangirai teo aloha kely, milaza fa ananany ny lakilen'ny fifidianana, dia ny fanakanana azy (Mugabe) mba tsy hilaza ny tenany ho nandresy tamin'ny fifidianana, na tahaka ny nataony tamin'ny 2008 dia ny tsy fanekeny ny fahareseny.
Kanefa, tokony ho ampy izay ho entin'ireo Zimbaboeana izay namaly ny antso mba hisoratra sy hanamarina ny lisi-pifidianana mba handraisany andraikitra feno ary hampisehoany amin'ireo mpanararaotra fahefàna hoe iza no tena mandidy, raha tsy izany dia hazakazak'adala ihany ny fandakàna an'i Zanu PF.
Jerenareo, iza izao no mihomehy. Demokrasia hoe, demokrasia inona?